InsideSales: Na-ekwurịta okwu, na-egwu egwuregwu, na-ebu amụma ma na-ele anya ahịa
Tọzdee, Ọktoba 31, 2013 Monday, October 18, 2021 Douglas Karr
InsideSales.com si PowerSuite ™ bụ a ebute nzaghachi njikwa usoro nke ahụ na-enye ndị otu ahịa ihe niile ha chọrọ iji bulie usoro ire ahịa dịpụrụ adịpụ ma tinye ahịa n'ime oke ego. Ezubere InsideSales.com sọftụwia ngwanrọ maka ịza ndu na ajụjụ ọsịsọ na nke ọma. Nke a na-enyere ndị ahịa aka ịbawanye ọnụ ọgụgụ kọntaktị na iru eru, yana ịre ahịa.
Ngwaahịa maka Salesforce CRM
PowerDialer ™ maka Ahịa - Igwe oku kachasị ike na ahịa wuru kpọmkwem iji na-agba ọsọ na Salesforce CRM. Chọrọ Salesforce CRM.
Pịa-to-Call ™ maka Salesforce - Pịa-To-Call ™ maka Salesforce na-eweta nbibi nyocha na teknụzụ nke ikpo okwu InsideSales.com na Salesforce CRM.
ObodoPresence ™ maka Salesforce - Naanị netịị otu mba edobere maka ndị na-ere ahịa na azụmaahịa ka ha ree ma zụta ahịa nke ọma na mpaghara site na ekwentị, web na email.
PowerStandings ™ maka Ahịa - PowerStandings ™ na-ewetara PowerDialer an ihe egwuregwu dị egwu na PowerDialer ™ maka Salesforce ma na - eme ka arụmọrụ rep.
PowerText ™ maka Ahịa - PowerText ™ na-echetara ndị na-echetara nhọpụta, izipu otu ozi, nsuso, na ịkọ akụkọ gbasara kọntaktị ekwentị niile n'ime SaaS CRM na-eduga, salesforce.com
Ngwaahịa maka InsideSales.com
Nweta Njikwa Management Platform - Uzo esi eme ka ndị ahịa na-ebu ụzọ na-achọ ihe niile ị nwere ike iji kpọtụrụ, tozuo, ma mechie ahịa ndị ọzọ.
PowerDialer ™ – Dialer kacha ike na ahịa. Ezubere maka B2B na ahịa B2C dị mgbagwoju anya. PowerDialer™ anaghị ebuli oge oku naanị, ọ na-ebuli nsonaazụ.
PowerInbound ™ - Ihe niile nke PowerInbound ™ telephony maka ụlọ ọrụ ịkpọ oku na-anabata. Na-ejikọ ya na PowerDialer ™ maka inbound / outbound call blending.
ObodoPresence ™ nke InsideSales.com - Ejikọtara ya na PowerDialer ™, LocalPresence ™ na-enye ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ azụmaahịa mpaghara karịa ahịa 280 na United States.
Ihe nzaghachi na ELF ™ - Sistemụ nzaghachi nzaghachi anyị na-eji arụ ọrụ arụrụ arụrụ arụ na “Electronic Labour Force ™” maka nzụlite ọgụgụ isi na njikwa ọrụ. Na-eziga ozi-e, fakis, na-ebugharị ụzọ, kpalite oku ekwentị na ndị ọzọ.
Ndekọ na nlekota oru - Dekọọ ma ọ bụ / lelee oku ọ bụla. Ọ dị mma maka ọzụzụ ọzụzụ na maka mmesi obi ike.
Uzoamaka ™ - Akara akpaka maka ozi olu na agbasa ozi na nhọrọ iji zipu ma ọ bụ zigara onye na-elekọta gị ndụ na-akpaghị aka.
Tags: ọkpụkpọn'ime ahịaInsidesales.comndu nurturingebe obibiike dialerPowerdialernlekota orundekọ ndekọnzaghachi ahịandị ahịaere ahịa crmnhazi oru
Ebumnuche Ecommerce 20 iji mụbaa Ahịa Ezumike